ယဇ်ကောင်ပေါ်က လင်းတများကို နှင်လိုက်ပါ | Driving the Vultures Away from the Sacrifice | Real Conversion
ယဇ်ကောင်ပေါ်က လင်းတများကို နှင်လိုက်ပါ
(SERMON#68 ON THE BOOK OF GENESIS)
၂၀၁၃၊ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်း
အသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌
ကျွန်ုပ်ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းက ကျွန်ုပ်၏သင်းအုပ်ဆရာ ဒေါက်တာတိမောသေလင်း နှင့်အတူ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၌ကျုင်းပသော တောင်ဘက်ခြမ်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်၏ ဓမ္မ စည်းဝေးပွဲတော်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာတွင် ကမ္ဘာဦးကျမ်းနှင့်ပါတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုစာအုပ်ကို လစ်ဘရယ်စောင့်သန်းဗတ္တိဇံအသင်းတော်၌ တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာလင်းက "ပရိသတ်စုဝေးရာကြမ်းပြင်"မှ ထိုစာအုပ်ကို ဆန့်ကျင်သောစကား ပြောခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်တွင် ကျွန်ုပ်သည် အသက်(၂၂)ရှိပါပြီ။ တနေ့သောအခါ ကမ္ဘာဦးကျမ်းကို ကာကွယ်သောစာအုပ် ရေးသားထုတ်ဝေဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ တစ်နေ့နေ့တွင် ဤကျမ်းစာအုပ်ထဲက ဒေသနာတော်အမြောက်အများ ရေးသား သီကုံးကြမည်ကို ကျွန်ပ်သိနေပါသည်။ ယနေ့ ဟောကြားသောဒေသနာတော်သည် ကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲက အမှတ်စဉ်(၆၈)ခုမြောက်သော ဒေသနာတော်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူး ပြု၍ မက်တပ်ရပ်လျှက် ကမ္ဘာဦး ၁၅း၁၁ကို ဖွင့်ထားကြပါစို့။
"ငှက်ရဲတို့သည် အသေကောင်တို့အပေါ်သို့ ဆင်းလာသောအခါ အာဗြဟံ နှင်လေ၏" (ကမ္ဘာဦး ၁၅း၁၁)။
အာဗြံသည် အိုမင်းနေပြီဖြစ်သော်လည်း သားသမီးမရရှိခဲ့ပါ။ ထိုအခါ ထာ၀ရဘုရားက အာဗြံဟံအား သင်၏အမျိုးအနွယ်သည် ကောင်းကင်ကြယ်များကဲ့သို့ ပွားများကြလိမ့်မည်ဟု အိမ်မက်ရူပါရုံအားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့ပါသည်။ "အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့ မှတ်တော်မူ၏။" (ရောမ ၄း၃) "အာဗြသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့ မှတ်တော်မူ၏။" (ကမ္ဘာ ၁၅း၆)။ ထို့ကြောင့် အာဗြဟံသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရခြင်းဖြစ်သည်။ အကျင့်တရားအား ဖြင့်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုစေလိုသဖြင့် ဘုရားသခင်ထံ တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ ထာ၀ရဘုရားသည် အာဗြံအား သားစဉ်မြေးဆက် အမွေခံနယ်မြေအဖို့ ခါနန်ပြည်ကိုပေးအပ်ရန် ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့ပါသည်။ ထာ၀ရဘုရားကလည်း သုံးနှစ်အသက်ရှိသော နွားမတစ်ကောင်၊ သုံးနှစ်အသက်ရှိသော ဆိတ်မတစ်ကောင်၊ သုံးနှစ်အသက်ရှိသောသိုးထီးတစ်ကောင်၊ ချိုးတစ်ကောင်၊ ခိုသူငယ် တစ်ကောင်ကို ငါ့အဖို့ယူဆောင်လော့ဟု မိန့်တော်မူပြီး ၎င်းတိရိစ္ဆာန်တို့ကို တစ်ဝက်စီ ခွဲခိုင်းပါသည်။ ရှေးဘိုးဘေးတို့ တိရိစ္ဆာန်ကို ထက်ဝက်ခွဲသကဲ့သို့ သူသည် ပဋိညာဉ်ကို ထက်ဝက်ခွဲထားသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သဘောတူညီစွာဖြင့် ပဋိညာဉ်ကို စောင့်ထိန်းကြရ မည်ဖြစ်င်္ပြီး အကယ်၍ ဂတိဝတ်အတိုင်း စောင့်ထိန်းဖို့ပျက်ကွက်သော် ကတိအတိုင်း ရှုံးနှိပ့်ခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ (စီအက်ဖ် ယေရမိ ၃၄း၁၈-၂၁)။ ဤသည်ကား ခရစ်တော်ဘုရား ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းပုံရိပ်ဖြစ်ပြီး ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလ ပူဇော်ခြင်းအားလုံးကို ပြည့်စုံစေသောသူဖြစ်သည်။
အာဗြံသည် ထာ၀ရဘုရား၏အမိန့်တော်ကို နာခံသူဖြစ်သဖြင့် ယဇ်ကောင်ကို မြေပေါ်သို့ ချထားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ထာ၀ရဘုရား ထင်ရှားလာမည်ကို စောင့်မျှော်ခဲ့၏။ ထိုစဉ်တွင် လင်းတတို့သည် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ အာရီဇိုနား သဲကန္တာရတောထဲက ရုတ်တရက်မျက်လှည့်ပမာ ပေါ်ထွက်လာသော လင်းတတို့ကို ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ဖူးပါသည်။ အဝေးပြေးလမ်းမထက် အသေကောင်ရှိမည်ဆိုလျှင် ကောင်းကင်၌ ငှက်များစွာတို့ပျံဝဲနေကြသည်။ မည်သို့သောနည်းဖြင့် အလျှင်အမြန် ရောက်ရှိလာကြသည်ကို နားမလည်နိုင်ပေ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက ၎င်းအဖြေကို သိပ္ပံပညာရှင်များ ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အဖြေကိုကား ကျွန်ုပ်မကြားရသေးပါ။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား "အသေကောင်ရှိရာ၌ (လင်းတ)တို့သည် စုဝေးကြလတ္တံ" (မဿဲ ၂၄း၂၈)။
၎င်းကျမ်းပိုဒ်က အာဗြံဟံ၏ ပဋိညာဉ်ကို ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကတိတော် နှင့်ဆိုင်သော ခါနန်ပြည်ကို အမွေခံဖို့ ထာ၀ရဘုရားသခင်၏ ကတိတော်ကို ကမ္ဘာ ၁၂း၁-၃၌ ဖေါ်ပြထားချက် အတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုဟောကြားမည်မှာ ပဋိညာဉ်အကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသင်ခန်းစာကို ယနေ့ကျွုန်ုပ်တို့ နေ့ရက်ကာလ၌ ပြည့်စုံနေကြောင်း ထောက်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊
ဤတရားဒေသနာတော်တွင် ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ ငှက်ရဲများ ဆင်းသက်လာကြ ကြောင်းကို အဓိကထားဟောကြားပါမည်။
၁။	ပထမ၊ ပူဇော်သောယဇ်ကောင်
ဓမ္မဟောင်းကာလ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားလုံးသည် ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်၌ အသေခံခြင်းကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
"(အာဗြဟံ)က အရှင်ထာ၀ရဘုရား ပေးသောပြည်ကို ကျွန်ုပ်အမွေ ခံရမည်ကို အဘယ်သို့ သိရပါအံ့နည်းမေးလျှောက်လေ၏။ ထာ၀ရဘုရား ကလည်း သုံးနှစ်အသက်ရှိသော နွားမတစ်ကောင်၊ သုံးနှစ်အသက်ရှိသော ဆိတ်မတစ်ကောင်၊ သုံးနှစ်အသက်ရှိသော သိုးထီးတစ်ကောင်၊ ချိုးတစ် ကောင်၊ ခိုသူငယ်တစ်ကောင်တို့ကို ငါ့အဖို့ယူလော့ဟု မိန့်တော်မူ သည့်အတိုင်း ထိုတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကိုယူ၍ တစ်ကောင်ကိုထက် ဝက်စီ ခွဲပြီးလျှင် ခွဲသောအသားတို့ကို တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ထားလေ၏။ ငှက်ကောင် တို့ကိုမခွဲ။" (ကမ္ဘာ ၁၅း ၈-၁၀)။
ကတိတော်တိုင်းပြည်ကို အဘယ်ကဲ့သို့ အမွေခံရမည်ကို အာဗြဟံသည် ထာ၀ရဘုရားအား မေးလျှောက်ခဲ့သည်။ အာတာဒဗလျူအိန့်ခ် ပြောကြားသည်မှာ "ရှေ့တော်၌ ခရစ်တော်အား ပူဇော်fရန် ပုံပမာဆောင်ခြင်းဖြစ်၏" ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ ထို့နောက် ပိန့်ခ်က "တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ချင်းစီသည် ခရစ်တော်၏ ပြီးပြည့်စုံသော ပုံဆောင်ခြင်းအနက်ကို ဆောင်ပါသည်။" ဟူ၍ ပြောခဲ့သေး၏။ သုံးနှစ် အရွယ်ရှိသော နွားမတစ်ကောင်သည် ပျိုရွယ်သောခွန်အားကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဆိတ်မ သည်ကား အပြစ်ဖြေရာပူဇော်သကာကို ကိုယ်စားပြု၏။ သိုးထီးမူကား ဝတ်ပြုရာကျမ်း၌ လာသည့်နည်းတူ ဘုရားဝတ်နှင့်ဆိုင်သော ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းအတွက် သီးသန့်ပူဇော် ရန်ဖြစ်သည်။ ငှက်ဟူသည် ကောင်းကင်မှလာသောသတ္တဝါဖြစ်သည်။ "သုံးနှစ်"ဟု သုံးထားသည်မှာ အစေခံတော်မူပြီးသော "သုံးနှစ်" ပြီးနောက်တွင် ခရစ်တော် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် အပူဇော်ခံရမည်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ဍ ပူဇော်ခြင်းကို လေ့လာကြည့်သော် အသွေးသွန်းခြင်းမရှိဘဲ အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိ၊ အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိ၊ အမွေဆက်ခံခြင်းလည်း မရှိနိုင်ပါ"။ (Arthur W. Pink, Gleanings in Genesis, Moody Press, 1981 edition, pp. 168, 169).
ဓမ္မဟောင်းကာလ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအကြောင်း လေ့လာဖတ်ရှုသူတိုင်း တိရိစ္ဆာန် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအကြောင်း သိနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို လေ့လာသော အခါ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက် အစားအသေခံပေးသော ယေရှုကို လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် အပူဇော်သေခံခြင်းကို သိမြင်ဖို့လိုပါသည်။ ဟေဗြဲဩဝါဒစာ၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ၊
"အကြောင်းမူကား၊ အညစ်အကြေးရှိသောသူတို့အပေါ်၌ ဖြန်းသော နွားသွေး၊ ဆိတ်သွေး၊ နွားမကလေး၏ပြာသည် သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌ စင်ကြယ်ခြင်းကို ပြုနိုင်သည်မှန်လျှင်၊ ထိုမျှမက အပြစ်ကင်းသောကိုယ်တော်ကို ထာ၀ရဝိညာဉ် တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ တင်လှူပူဇော်သော ခရစ်တော်၏အသွေးသည် သေခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုပယ်ရှင်း၍ သင်တို့သည် အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုမည့်အကြောင်း၊ သင်တို့၌ ကိုယ်ကိုကိုယ် သိသောစိတ်ကို စင်ကြယ်စေခြင်းငှါ သာ၍တတ်နိုင်တော်မူသည် မဟုတ်လော့" (ဟေဗြဲ ၉း၁၃-၁၄)။
ပူဇော်သောယဇ်ကောင်များနှင့် ငှက်ကို အာဗြဟံသည် ထာ၀ရဘုရားရှေ့တော်၌ ချထားခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကို ပူဇောခံသောယေရှုကို ရည်ညွှန်းဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် စပါကျန်၏ဒေသနာတော်ကို နေ့တိုင်းလိုလို ဖတ်ကြားခဲ့သည်။ ယေရှုဘုရား၏ ပြင်းထန်သောဝေဒနာခံစားခြင်းအကြောင်းကို အရမ်းကြိုက်နှစ်သက် ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို အမှောင်လွှမ်းမိုးထားသော ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ညသို့ တဖန်တလဲလဲ ပို့ဆောင်နေပါသည်။ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတို့၏ အပြစ်ဒဏ် ကိုယ်တော်အပေါ်၌ ကျရောက်စေသည်ကို တဖန်တလဲလဲ အသိရစေပါသည်။ ကိုယ်တော် ဆုတောင်းတော်မူစဉ်တွင် "ချွေးသည် အသွေးကဲ့သို့ စီးဆင်းရသည့်" တိုင်အောင် အပြစ်ကြွေးကို ကိုယ်တော်ခံခဲ့ရသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိရစေပါသည်။ ထိုမျှမက ကိုယ်ခန္ဇာအသေခံပြီး မြေကြီးထဲသင်္ဂြိုလ်ခြင်းခံရသည့်တိုင် ဝေဒနာခံစားရသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား အမှတ်ရစေပါသည်။
ထို့နောက် တရားဟောဆရာကြီးက ယေရှုကို ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးအကဲ ထံသို့ ပို့ဆောင်ကြပြီး ထိုနေရာ၌ သရော်ပြောင်လှောင်ခြင်း ခံရသည့်နေရာသို့ ကျွန်ုပ်တို့အား ပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသည် ရိုက်နှက်ခြင်းကို ခံရသည်။ တံတွေးဖြင့်မျက်နှာကို ထွေးခြင်းခံရသည်။ နှုတ်ဆိတ်မွေးဆွဲခြင်းခံရသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြပါသည်။ စပါကျန်က ကျွန်ုပ်တို့အား ပိတ်လက်မင်း၏နန်းတော်သို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ရက်စက်စွာကိုယ်တော်၏ ကြမ်းပြင်ကိုရိုက်ခဲ့ကြသည်ကို၎င်း၊ ဆူးဖြင့်ရက်သော ဦးရစ်သရဖူကို တမင်ဆွဲစောင့်ပြီး ဆောင်းစေကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိရစေခဲ့ပါသည်။ ထိုမျှမကပါ ကိုယ်တော်သည် သွားရမည့်ကားတိုင်ခရီးကြမ်း၌ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းကားတိုင်ကိုထမ်းရွက်စဉ် အဖန်ဖန် အခါခါချော်လဲခဲ့သည်ကိုလည်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား သတိရစေပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ် ခြေလက်သံမှိုစွဲခံရသည်ကို၎င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အစား လှံချွန်ဖြင့် နံဘေး ဖေါက်ခြင်းခံရသည့်တိုင်အောင် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် အသေခံသွားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အား ပြေပြခဲ့ပါသည်ဍ
စပါကျန်သည် ထိုအကြောင်းအရာ၌ ရပ်တန့်လျှက်မရှိခဲ့ပေ၊ Qက်လက်၍ အမှောင်ထုလွှမ်းထားသော ကျောက်ဂူထဲ၌ ယေရှု၏အလောင်းတော်ကို သင်္ဂြီုလ်ပြီး ကျောက်တုံးကြီးဖြင့် ၎င်းကျော်ဂူသချိုင်းကို တံဆိပ်ခတ်လျှက် ပိတ်ထားခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးခဲ့ပါသည်။ တရားဟောဆရာကြီးက ထိုမျှမကသေးပဲ နံနက်မိုးလင်းစအာရုဏ်ဦးတွင် အမျိုးသမီးတို့ သချိုင်းဂူသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြသည်ကို ဖွင့်ပြပေးခဲ့သည်။ ထိုသူတို့နှင့်အတူ အံ့ဩကြောက်လန့်ဖွယ်ကောင်းကင်တမန်တို့၏ အသံတော်ကို နားထောင်ကြစို့။
"ကောင်းကင်တမန်ကလည်း ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်၊ လက်ဝါး ကားတိုင်မှာသက်သေယေရှုကို သင်တို့ရှာကြသည်ကို ငါသိ၏။ အရပ်၌မရှိ၊ မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ပြန်ရှင်တော်မူပြီ။ လာကြ သခင်လျောင်းတော်မူရာ အရပ်ကို ကြည့်ကြလော့" (ရှင်မဿဲ ၂၈း၅-၆)။
ဟာလေလုယာဍ ဟာလေလုယာဍ ဟာလေလုယာဍ
ကောင်းကင်သည် ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ဖွင့်ထားလျှက်ရှိ
သံပြိုင်သီချင်း သီဆိုကြ ဟာလေလုယာဍ
ကျွန်ုပ်တို့ ထာ၀ရအသက်ရှင်လိုငှါ ဟာလေလုယာဍ
(၁၈၃၂-၁၉၀၉ ခုနှစ်၊ ဖရင့်စီပေါက်သီကုံးသားသော ကယ်တင်တော် မူပြီ။)
"ငါသည် ကိုယ်တိုင်ခံယူသည့်အတိုင်း သင်တို့အား ရှေ့ဦးစွာ အပ်ပေးသော အကြောင်းအရာဟူမူကား ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာ သည့်အတိုင်း ငါတို့ အပြစ်ကြေင့် အသေခံတော်မူ၏။ သင်္ဂြိုလ်ပြီးမှ ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်း သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ရှင်ပြန်တော်မူ၏" (၁ကော ၁၅း၃-၄)။
ထိုအရာသည် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်ဍ ထိုအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားပင်ဖြစ်၏။ ထိုအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သီချင်းနှင့် ထိုအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်လင့်ရာဖြစ်၏။ ထိုအရာသည် အာဗြံပူဇော်သောယဇ်ကို ညွှန်းဆိုခြင်း ဖြစ်သည်ဍ အာမင်ဍ အာမင်ဍ
"ငှက်ရဲတို့သည် အသေကောင်တို့အပေါ်သို့ ဆင်းလာသောအခါ အာဗြဟံနှင်လေ၏" (ကမ္ဘာ ၁၅း၁၁)။
၂။	ဒုတိယ၊ ငှက်ရဲတို့ဆင်းသက်လာသည်။
ဟေဗြဲဘာသာစကားအရ "လင်းတငှက်" ဟုဆိုလိုပါသည်။ အသေကောင်ကို စားခြင်းက မည်သို့ဆိုလိုပါသနည်း။ မည်သည့်အရာကို ပုံပမာဆောင်ပါသနည်း။ ထိုအရာသည် စာတန်မာရ်နတ်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအကြောင်း သိနေရပါသည်။ မကြာတော့ သောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသည် မာရ်နတ်ဆိုး၏ ကျော့ကွင်း၌ ကျော့ မိပါတော့မည်။ ကျွန်ုပ်ငယ်ငယ်တုန်းက တစ်ခါတစ်လေမှ မကြားခဲ့ရဖူးသော ထိတ်လန့် ဖွယ်သိက္ခာကျဆင်းစေသော အကျင့်စရိုက်များ၊ စာတန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၊ ယနေ့ခေတ်၌ အသင်းတော် တရားပလ္လင်ထက်၌ပင် ရှိနေလေပြီ။ တပါးသူတို့ နားကြားချမ်းသာစေသော တရားဒေသနာတော်များကိုသာ ဝေငှဟောပြောကြသော တရားဟောဆရာတို့က ကျွန်ုပ်တို့အား အငိုက်မိစေပါသည်။ "အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် သွေးသားရှိသော ရန်သူတို့နှင့် ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ကြရသည်မဟုတ်။ အထွဋ်အမြတ်တို့နှင့်၎င်း၊ အာဏာစက်တို့နှင့်၎င်း၊ လောကီမှောင်မိုက်၌အစိုးတရပြုလုပ်သော မင်းတို့နှင့်၎င်း၊ မိုးကောင်းကင်၌နေသော နတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်း ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ကြရ၏" (ဧဖက် ၆း၁၂)။ နတ်ဆိုးများအကြောင်း လေ့လာခြင်းမရှိပါက စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အလွယ်တကူ ဝါးမျိုမည်ဖြစ်သည်။ "သမာသတိရှိလျှက် မအိပ်ပဲစောင့်နေကြလော့။ သင်တို့၏ ရန်သူတည်းဟူသောမာရ်နတ်သည် ဟောက်သောခြေင်္သေ့ကဲ့သို့ အဘယ်သူကို မျိုရမည်နည်းဟူ၍ လှည့်လည်ရှာဖွေလျှက်ရှိ၏" (၁ပေ ၅း၈) သခင်ယေရှုဘုရား မိန့်တော်မူသည်မှာ "အစေ့ကိုကြဲသည်တွင် အချို့အစေ့တို့သည် လမ်း၌ကျသဖြင့် ကျော်နင်းခြင်းကိုခံရ၍ မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည် ကောက်စားကြ၏" (လုကာ ၈း၅)။ ယေရှုသည် ငှက်ရဲတို့နှင့်ပါတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အား သံသယရှင်းစေလိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်က တရားစကားကို ကြားသည်ရှိသော် ယုံကြည်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ မရောက်စေခြင်းငှါ မာရ်နတ်သည်လာ၍ တရားစကားကို နှလုံးထဲမှ နုတ်ယူသောသူကို ဆိုလိုသတည်း" (လုကာ ၈း၁၂)။
ထိုငှက်ရဲတို့သည် စာတန်မာရ်နတ်က ပူဇော်သကာအား ဖျက်ဆီးဖို့ရန် စေလွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်ကို သံသယဝင်စရာမလိုပေ။ မာရ်နတ်သည် စိတ်နှလုံးသားထဲက နုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲနုတ်ဖို့ အစဉ်ကြိုးစားနေ၏။ အသင်းတော်ထဲက နုတ်ကပတ်တော် ကိုလည်း ထိုအတူဆွဲနုတ်ရန် ကြိုးစားနေပါသည်။ဍ
လွန်ခဲ့သော၂၀ ရာစုအတွင်း၌ ခရစ်တော်ကားတိုင်ပေါ် အပြစ်သားတို့ကိုယ်စား အသေခံခြင်းကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် စာတန်မာရ်နတ်၏ ထိုးနှက်မှုဖြစ်သည်ဟူ၍ စပါကျန်သည် ၎င်းကိုဆန့်ကျင်တရား ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်၌လည်း မသိသာမထင်ရှားသောနည်းလမ်းအားဖြင့် စာတန် မာရ်နတ်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်နေပါသည်။ စပါဂျန်သည် တိမ်ကောသွားသောအပြစ်သားတို့ အစား အသေခံခြင်းအကြောင်း ဟောပြောသက်သေခံဝေငှခဲ့သည်။ဍ ဖန်ဒမင်တယ်လ် အသင်းတော်များ၌လည်း ခရစ်တော်၏နာကျင်သောဝေဒနာနှင့် အသေခံခြင်းအကြောင်း ဟောကြားခြင်းပင်မရှိတော့ပေ။ ဒေါက်တာမိုက်ကယ်အက်စ်ဟက်တန်း ကောက်ချက်ပေး ခဲ့သည်မှာ တရားဟောဆရာအားလုံးနီးပါး ခရစ်တော်ဘုရား၏ ပြုမူအသွင်အပြင် လက္ခဏာအကြောင်း ဟောကြားခြင်းမရှိတော့ပေဟူ၍ ကောက်ချက်ချခဲ့ပါသည်။ သူ၏စာအုပ်ကို Christless Christianity (Baker, 2008). အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ရှိသော တရားဟောဆရာများ ၎င်းစာအုပ်ကိုဖတ်သင့်ကြပြီး မိမိကိုကိုလည်း "မည်သည့်ဒေသနာ ကို နောက်ဆုံးထားပြီး ခရစ်တော်ကို ဗဟိုပြု၍ ဝေငှခဲ့သနည်း၊ ဟူ၍ မေးကြည့်သင့် ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ မိမိကိုကို စစ်မေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ထိတ်လန့်ရကြမှာ မလွဲပေ။
ယနေ့ခေတ်တရားဒေသနာအားလုံးတို့သည် ခရစ်တော်ကို ဗဟိုမပြုကြတော့ဘဲ၊ လူသားတို့၏ လိုအပ်မှု၊ ခံစားမှု၊ ဒုက္ခပြဿနာ၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုသာ အဓိကထား ဟောကြားပါသည်။ဍ ဒေါက်ဒေးဝိဒ်အက်ဖ်ဂေးလ်က ၎င်းပြောင်းလဲမှုကို မှတ်သား ရေးသားသည်။ ထိုသူက "ဧဝံဂေလိတရားဟောဆရာတို့သည် တစ်စုံတစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုသာ ဦးတည်ဟောကြားခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်ကို ဗဟိုပြု၍ မဟောကြား ခဲ့ကြပါ။ ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်အား ကျွန်ုပ်တို့အစား အသေခံရန် စေလွှတ်ခဲ့ခြင်၊ တပါးတည်းသောသားတော်ကို ပေးသနားတော်မူခြင်း စသည်တို့ကို မဟေပြော၊ မိမိတို့ လုပ်ဆောင်သမျှနှင့် မိမိတို့ကောင်းကြီးခံစားရခြင်းကိုသာ အလေးပေးခဲ့ကြသည်" (David F. Wells, Ph.D., The Courage to Be Protestant, Eerdmans, 2008, pp. 182,183).
ထိုဆရာသည် ခေါင်းမာသောဆရာတစ်ပါးဟူ၍ သင်ထင်ပါသလား၊ မိမိကိုကို မိမိမေးမြန်းကြည့်ပါ။ သင်သည် ဘယ်အချိန်တုန်းက ခရစ်တော်၏ အသေခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ကြွလာမည့် တရားဒေသနာတော်ကို သင်ကြားခဲ့ပါသနည်း၊ (မိမိတို့၏ချီဆောင်ခြင်းကို မဆိုလို၊ ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်)။ နုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာကို အခြေခံသော ယုံကြည် သူများ အသင်းတော်ပင်လျှင် ခရစ်တော်ကို ဗဟိုပြု၍ တရားဟောခြင်းမရှိကြ။ မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက်ကိုသာ အဓိကထားကြပါသည်ဍ
ဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်နေရာ၌မဆို ကျွန်ုပ်တို့သည် ယဇ်ပူဇော် ထားသော ခရစ်တော်ကိုယ်ပေါ် ဆင်းသက်လာမည့် လင်းတများကိုနှင်ချဖို့ လိုပါသည်ဍ ဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်နေရာနှင့်မဆို ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှင်ပေါလုနှင့်အတူ ပြောရမည်မှာ၊
"အကြောင်းမူကား ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော လက်ဝါးကားတိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော သခင်မှတပါး အဘယ်အရာကိုမျှ သင်တို့ ငါမသိလိုဟု ငါစိတ်ပြဌာန်းချက်ရှိ၏" (၁ကော ၂း၂)
တစ်ဦးတစ်ယောက်က "ထိုကျမ်းက ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်မှုအတွက် အထောက်အကူ မဖြစ်စေ"ဟူ၍ ပြေကြားပေမည်။ ကျွန်ုပ်ပြောပါမည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်ချက်ကို မှီလိမ့်မည်။ စိတ်ပညာရှင် ပါရဂူအိုရက်ပ်ဝင် ပရယ်သာရစ်တာဒိုင်ဂျက်စ် သို့မဟုတ် ဂျူးဝေလ်အောစတင်းတို့၏ သတိပေးခြင်းထက် သာလွန်၍ကောင်းမွန်ပါသည်ဍ တမန်တော်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
"ထိုဘုရားသခင်အားဖြင့် သင်တို့သည် ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏။ ထိုသခင်မူကား၊ ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်း ငါတို့၌ ပညာမှ စ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်းရွေးနုတ်ခြင်းဖြစ်တော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍ ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီဝါကြွားသောသူမည်သည်ကား ထာ၀ရဘုရား ၌သာ ဝါကြွားစေ" (၁ကော ၁း၃၀-၃၁)။
"ယုဒလူတို့သည် နိမိလက္ခဏာကို တောင်းတက်ကြ၏။ ဟေလသ လူတို့သည် ပညာကိုရှာတတ်ကြ၏။ ငါမူကား လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော ခရစ်တော်၏အကြောင်းကို ဟောပြော၏။ ထိုအကြောင်းသည်ကား ယုဒအမျိုး ထိမိ၍ လဲစရာအကြောင်းဖြစ်၏။ တပါးအမျိုး၌ကား မိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏။ သို့သော်လည်း ယုဒလူဖြစ်စေ၊ ဟေလသလူဖြစ်စေ ခေါ်တော်မူသောသူတို့၌ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ဖြစ်သော ခရစ်တော်၏ တရားဖြစ်၏" (၁ကော ၁း၂၂-၂၄)။
ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးဖြစ်၏ဍ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော် ဖြစ်၏ဍ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်၏ လိုအပ်ချက်ဖြစ်၏ဍ နောက်ပြီး ခရစ်တော်သည် အားလုံး၏လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်ဍ ကယ်တင်ရှင်ကို သိနားလည်သောသူတို့သည် ရှင်ပေါလုနှင့် အတူ ပြောနိုင်ပါသည်။
"ငါ့ကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသော ခရစ်တော်အားဖြင့် ခပ်သိမ်းသော အမှုတို့ကို ငါတတ်စွမ်းနိုင်၏" (ဖိလိပ္ပိ ၄း၁၃)။
ဤတရားဒေသနာတော်ကို နားထောင်နေကြသော သူအပေါင်းတို့၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကားတိုင်ပေါ်အသက်စတေးခံသည့်တိုင် ချစ်တော်မူသော ယေရှု၏နာမတော်ကို ချီးမြှောက်ကိုးကွယ်ကြစို့ဍ သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်လက်ခံကြစို့၊ သက်သေခံဝေငှ တိုက်တွန်းကြပါစို့လားဍ တပါးသူတို့အမှန်တကယ် ကြားလိုသောအရာသည် စိတ်ပညာ နှင့်ပါတ်သက်သော ပညာမဟုတ် အကူအညီဖြစ်စေသော အပြောအဟောမဟုတ်နိုင်ပါ။ ထိုသူတို့ အမှန်တကယ် လိုအပ်သည်မှာ ခရစ်တော်ဘုရား၏ အသွေးတော်နှင့် ပတ်ဖြန်းထားသော ဧဝံဂေလိသတင်းပင်ဖြစ်သည်ဍ
ကျွန်ုffပ်အားနည်းမောပန်းပါ၊ မစွန်းနိုင်၊ ညစ်စွန်းသည်။
ကျွန်ုပ်အပြစ်မှကယ်ဖို့၊ ယေရှုသည်ကြွ၊ အောက်မေ့
(၁၈၃၄-၁၉၁၁)ခုနှစ် အေကသရင်းဟန်ကီ ရေးသားသော ရှေးဝတ္ထုဟောင်းကျူး)
(၁၉၄၆၊ မိုက်မူဒေါက်သီကုံးသော "ဂရုဏာနှင့်ပြည်စုံစေ"ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို
(၁၈၆၅-၁၉၁၉ ခုနှစ် မာဂရက်ဂျေ.ဟေရီ သီကုံးသေား "ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းမည်")။
ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးနေသောသူများ ကျေးဇူးပြု၍ ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးပါ။
ခရစ်တော်ယေရှုသည် သင့်အပြစ်အဖိုးအခအတွက် အသေခံပေးဆပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်အသေခံသောအခါ သင်၏နှလုံးသားထဲမှာ သင်နှင့်အတူ အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့အပြစ်အဖိုးအခအတွက် ကိုယ်တော်သည် အသွေးတော် စွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင် သင့်ကို ချစ်၍ဖြစ်သည်။ သင့်၏အပြစ်အဖိုးအခအတွက် ကိုယ်စား အသေခံစဉ်တွင် "အမှုပြီးပြီ" ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ည ခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုံက သင့်ကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေပါသည်။ သင့်အဖို့ ဆုတောင်းပဌနာပြုနေပါသည်။ ယခု သင်နှင့်အတူ ဝိညာဉ်တော်ဘုရား အတူရှိနေ ပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် "ငါ့ထံသို့လာလော့။ ငါသည် ချမ်းသာပေမည်" (မဿဲ ၁၁း၂၈)။ ကိုယ်တော်ထံသို့ မိတ်ဆွေတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါမည်လား၊ ယနေ့ညပင် ကိုယ်တော် အား ကိုးစားပါမည်လား ၊ မာရ်နတ်ဆိုးက "ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်၊ ကယ်တင်ခြင်း လည်း သင့်အားပေးမည်မဟုတ်"ဟု သင့်ကို သွေးဆောင်ပါလိမ့်မည်။ အာဗြဟံသည် လင်းတငှက်များကို နှင်ထုတ်သကဲ့သို့ မာရ်နတ်ဆိုးများကို နှင်ထုတ်လိုက်ပါ။ ဝိညာဉ်ဆိုး၏ ပြောသံကိုနားမထောင်ပါနဲ့ဍ ငြင်းပယ်လိုက်ပါ။ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်က နှင်ထုတ်လိုက်ပါဍ ခရစ်တော်သခင်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်လိုက်ပါ။ ကိုယ်တော်သည် သင့်အား ခွင့်လွှတ်တော်မူပြီဖြစ်သည်။ သင့်အား ဖြောင့်မတ်စေသူဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ယခုပင်လျှင် သင့်အား ကယ်တင်ပါလိမ့်မည်ဍ "ဂုဏ်တော်ချီး မွမ်းမည်"နှင့်"ဂရုဏာနှင့်ပြည်စုံစေ" ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သီဆိုပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည်အသက်တာပြောင်းလဲပြီး စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်တစ်ဦး ဖြစ်လိုပါက အနောက်ဘက်ဆွေးနွေးခန်းသို့ ကြွလှမ်းလာခဲ့ပါ။ ဒေါက်တေခေကန်က ထိုတိတ် ဆိတ်သောအခန်းသို့ ကျွန်တော်တို့အား ဦးဆောင်ပြီး ဆွေးနွေးဆုတောင်းပေးပါ လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ သီချင်းဆိုနေစဉ် လှမ်းလာခဲ့ကြပါ။
ဒေါက်တာချန် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ကျေးဇူးပြု၍ ဆုတောင်းပေးပါ။
တရားဒေသနာမတိုင်ခင်၊ မစ္စတာကျူဒေါင်လီမှ ကမ္ဘာဦး ၁၅း၁-၁၈ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
- တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်ဖ်မှ (၁၉၁၄-
၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ အီရာအက်ဖ်စတန်ဖေလ် သီကုံးရေးသားသော " ဆူးရစ်သရဖူ"
ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။
(ရောမ ၄း၃၊ ကမ္ဘာဦး ၁၅း၆၊ ယေရမိ ၃၄း၁၈-၂၁၊ မဿဲ၂၄း၂၈)
၁။ ပထမ၊ ပူဇော်သောယဇ်ကောင်
ကမ္ဘာဦး ၁၅း၈-၁၀၊ ဟေဗြဲ ၉း၁၃-၁၄၊ မဿဲ ၂၈း၅-၆၊ ၁ကော ၁၅း၃-၄
၂။ ဒုတိယ၊ ငှက်ရဲတို့ဆင်းသက်လာသည်။
ဧဖက် ၆း၁၂၊ ၁ပေ ၅း၈၊ လုကာ ၈း၅၊ ၁၂၊ ၁ကော ၂း၂၊ ၁း၃၀-၃၁၊ ၂၂-၂၄၊ ဖိ၄း၁၃၊ မဿဲ ၁၁း၂၈